"ပြည်သူဖက်ကို မျက်နှာမူပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါမျိုးကိုဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ " - Myanmar Pressphoto Agency
“ပြည်သူဖက်ကို မျက်နှာမူပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါမျိုးကိုဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ “
AYABank Bago Interviews MPA Myanmar PDF
Interviews September 15, 2021 ·0Comment
By MPA ( အင်တာဗျူး ​)
ပဲခူးမြို့ ၊ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲ(၁)မှ ကျပ် သိန်းလေးသောင်းကျော် တင်ဆောင်လာသော ယာဉ်အား ဓားပြတိုက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် မီဒီယာ MWD၏ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကိုမျိုး နှင့် အင်တာဗျူး
မေး။​ ။​ငွေကျပ်သိန်းလေးသောင်းဓါးပြတိုက်မှုခေါင်းဆောင်လို့ စကစ က ထုတ်ပြန်တာသိသိချင်းဘယ်လိုခံစားရသလဲ ။
ဖြေ။ ။ သိသိချင်းမှာ အရမ်းတော့ထွေထွေထူးထူးမရှိခဲ့ပါဘူး။​ အရမ်းတုန်လှုပ်တာလည်း မရှိဘူး။​ ကျွန်​တော့်နေအိမ်ဆိုလည်း စစ်တပ်က ဧပြီလကတည်းက တောက်လျှောက်ပိတ်ထားတာဆိုတော့ ကျွန်​တော့်ကို တောက်လျှောက်လိုက်ရှာနေတာလည်းသိတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဖျက်တယ်ဆိုတာသိတော့အရမ်းကြီး ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ပါဘူး။​
မေး ။ ။​ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေ ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးစွပ်စွဲထားတာကို ဘာများပြန်ပြောချင်ပါသလဲ ။
ဖြေ။ ။ ဒီဟာက ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ တော်လှန်ရေးလုပ်နေသူတွေကို စကစ စစ်တပ်ကပုံဖျက်နေကျပဲဖြစ်တယ်။ ခုကလည်း ကျွန်​တော်နဲ့ PDF နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ ပုံဖျက်တာပေါ့။ ဒီလုပ်ငန်းတွေက ကျွန်​တော်တို့ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပေါင်းပြီးပုံဖျက်တာပေါ့။​ စစ်တပ်က ပြည်သူအကြား ဝေဝါးသွားအောင် ပုံဖျက်မှုသက်သက်ပါပဲ။
မေး ။​ ။ ဒီဖြစ်စဥ် ခုလိုပုံဖျက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူကိုပြောချင်တာဘာရှိမလဲ။
ဖြေ။ ။ သေသေချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဖြစ်စဥ်ကြီးတစ်ခုလုံးက ကျွန်​တော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိနေဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစ်တပ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ အင်းတကော်မှာဖြစ်သွားတယ်၊ နောက်ပဲခူးဆိုတာကလဲ စစ်တပ်ကအပြည့် အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ရှိနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ သိန်းပေါင်း လေးသောင်းကို လုပ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။​ အဖမ်းခံရတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့၀င်တချို့နဲ့ ပေါင်းပြီးရောပြီးမှ ဒီကိစ္စတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပုံချပြီးလုပ်တဲ့ ကိစ္စက ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကို စွပ်စွဲပုံဖျက်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။
မေး။ ။ ဒီဖြစ်စဥ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖမ်းခံရတဲ့ ငါးယောက်နဲ့ ပတ်သက် ဆက်စပ်မှုရှိလား။​
ဖြေ။ ။ ငါးယောက်စလုံးတော့မဟုတ်ဘူး၊ အဲ့ထဲကနှစ်ယောက်က ကျွန်​တော်နဲ့သိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။
မေး။ ။ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာပြန်လည်ဖြေရှင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးဦး။
ဖြေ။ ။ အဓိကဖြေရှင်းပေးထားတယ်။ ကျွန်​တော်တို့ထဲကတစ်ယောက်က AYA ရဲ့CDM လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ဘဏ်၀န်ထမ်းက ဘဏ်ကိုဓါးပြပြန်တိုက်တယ်ဆိုတာ ဓမ္မဓိဌာန်အရမ်းကျလွန်းနေတယ်။ အရမ်းကိုပုံသေနည်းဆန်တယ်။ ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သာမန်ကျောင်းသားပေ့ါ ဒီလူတွေကနေမှလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါကဘယ်နည်းနဲ့မှ ယုတ္တိဗေဒ မဆန်နေဘူး။ PDF တပ််ဖွဲ့၀င်တွေဆောင်ရွက်တယ်ပြောတယ် PDFတပ်ဖွဲ့၀င်တွေကမြို့ပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ ပေါ်ပေါ်တင်တင်နေလို့မရတဲ့အနေထားမှာကို လုပ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ ကျွန်​တော့်အနေနဲ့ ဒါတွေကိုစီစဥ်ဖို့မပြောနဲ့ စကစလက်က လွတ်အောင်ရှောင်တိမ်းပြီးနေနေရတဲ့အနေထားမျိုးမှာ ဒါမျိုးတွေလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က ဝါဒမှိုင်းတိုက်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့သူတွေက ဒီလိုမျိုးလုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တယ်ဆိုတာ သက်သက်ပုံဖျက်တာပဲ။ ပြည်သူဖက်ကို မျက်နှာမူပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါမျိုးကိုဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူး။
မေး။​ ။ဘာလို့ ပုံဖျက်တာလို့ထင်ပါသလဲ။​
ဖြေ။ ။ ဘာလို့ပုံဖျက်တာလဲဆိုတော့ မတ်လလောက်ကတည်းက ကျွန်​တော့်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်။ ဖမ်းလို့မရဘူး ပဲခူးမှာဆိုရင်ကျွန်​တော့်ကိုအဓိကလိုချင်ကြတယ်။ မရတော့ ကျွန်​တော့်ကိုပုံဖျက်တယ် အဲလိုပဲထင်ပါတယ်။
#AYAဘဏ်ဓါးပြ #ဝါဒဖြန့် #PDF #MPA #အင်တာဗျူး
“Organizations on People’s Behalf Won’t Do Like That”
By MPA (Interview)
An interview with Ko Myo who’s been named by the terrorist SAC’s propaganda media, MWD, to be the leader of the robbery in whichacash van of the Bago Ayerarwady branch 1 – which was carrying over 42,000 Lakhs of Kyats – was robbed.
Q: How do you feel about being named by the SAC as the leader ofa42,000 lakhs of Kyats robbery?
A: As soon as I learnt it, there wasn’t much excitement. I wasn’t shaken. My house has been blocked by the SAC since April and I’ve been consistently being chased. So it’s no wonder they want to distort about me.
Q: What do you want to say about the terrorist SAC accusing you of being the leader?
A: It’s SAC’s usual tactic to distort about those involved in the revolution in this democracy battle. Even now, they’re distorting me to be associated with the PDF by saying that I am leading these activities. It’s just that they military wants to trick the people by doing this.
Q: What is your message to the public about this distortion?
A: If we closely look at the process, it’s inasituation where it’s nearly impossible for me to do. Because it happened in Indakaw which is heavily surrounded by military troops. Plus, Bago is alsoaplace where heavy military forces are present. It’s nearly an impossible task to (rob) 42,000 Lakhs amount of money – no way! Saying it was done in association with some arrested PDF members just means they want to distort the organizations involved in the people’s revolution.
Q: Regarding the process, do you have any ties with the arrested five?
A: Not with all five, but two of them are my acquaintances. I have no association with the rest.
Q: Please tell us about your clarification on your Facebook post.
A: It was clarified. One of us is an AYA who joined the CDM. It’s too offensive to the vow forabank staff to rob the bank. It’s something that’s impossible. The next one isastudent. They have accused that they’ve done this. It’s illogical. They said the PDF did it but they also said they have made sure the PDF don’t make obvious existence and movement in towns. I’ve been busy running away from the SAC, let alone doingathing like this. It’s clearlyadistortion propaganda in an attempt to show that anti-dictators commit things like this. Organizations on behalf of the people would never doathing like this.
Q: Why do you think they want to distort?
A: Because they’ve been trying to arrest me since March, but they can’t. Especially, in Bago, they want me. But I think they just distort about me because they can’t get me.
#AYARobbery #Propaganda #PDF #MPA #Interview